VaChinamasa Vokonzera Mutauro neKuti VaMugabe Voga Vanogona Kudaidzira Sarudzo
Gurukota rinoona nezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vanoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanogona kumanikidzwa kugurira panzira hupenyu hwedare reparamende neseneti kuitira kuti sarudzo dziitwe gore rinouya.
Vachitaura nesangano renhau re Reuters, VaChinamasa vanoti panongopera kunyorwa bumbiro idzva remitemo yenyika panofanira kuti paitwe sarudzo.
Vanotiwo MDC iri kusunga rundaza munzira yekuvandudza zvinhu nekuti iri kutya kukundwa musarudzo.
Vamwe mubato reZanu-PF vanoti vakaoma musoro mubato iri ndivo vari kuda kuti sarudzo dziitwe gore rinouya pasina zvakawanda zvashanduka sezviri kudiwa neSADC nekuti vari kutya kuti pakaitwa sarudzo dzakachena, bato iri rinoendeswa kwamupfiganebwe neMDC.
Asi veMDC vanoti Zanu-PF ndiyo iri kuomesa musoro. NeMugovera, munyori mukuru muMDC-T, VaTendai Biti, vakapika kuti havapinde musarudzo dzisina kuchena uye kana mitemo inotsikirira vanhu isina kuvandudzwa.
Asi vanokokera Zanu-PF mudare reparamende, VaJoram Gumbo, varamba mashoko ekuti bato ravo ndiro riri kuomesa musoro.
Asi mutevedzeri waVaChinamasa, Senator Obert Gutu veMDC-T, vanoti mashoko aVaChinamasa neZanu-PF ndeevanhu vapererwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaJoy Mabenge, avo vanoshanda nesangano reInstitute for a Democratic Alternative for Zimbabwe, vanoti Zanu-PF iri kuda kuita sarudzo nechimbichimbi sezvo VaMugabe vokwegura.